यी हुन् प्रेम अ’न्धाे हुन्छ भनेर सा’बित गर्दै आफुभन्दा धेरै जेठी युवतीसँग बिहे गर्ने ब’लिउडका १७ जाेडी – Gandaki Chhadke
ब’लिउड दुनियाँ आफैमा रो’चक छ । विभिन्न कारणले से’लिब्रेटीहरु चर्चामा आउने गर्दछन् । यहाँ हामीले केही यस्ता बलिउड से’लिब्रेटीको चर्चा गर्दैछौ, जसको उमेर आफ्नी श्रीमतीको भन्दा कम छ ।१. फराहा खान र शि’रिष कु’न्दन:यो जोडीको उमेर अन्तर ८ बर्षको छ । बलिउडमा शिरिषले श्रीमती फ’राहा खानको चलचित्र ‘मे हुँ ना’बाट सम्पादनमा हात हा’लेका थिए । उनले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘जो’कर’ पूर्ण रुपमा अ’सफल भएको थियो । फ’राहा शिरष भन्दा ८ बर्ष जेठी छिन् ।
२. ऐश्वर्या राय र अभिषेक बच्चन:अभिषेक भन्दा उनकी पत्नी नायिका ऐश्वर्या राय २ बर्ष जेठी छिन् । सन् २००७ मा यो जोडीले विवाहा गरेको थियो । उनीहरुको हाल छोरी पनि छिन् । नायक सलमान खान र विवेक ओवरायसँग प्रेम सम्बन्ध टु’टेपछि ऐश्वर्याले अभिषेकसँग बिहे गरेकी हुन् ।
३.फ’रहान अ’क्तर र अधुना भवानी:बलिउडका चर्चित निर्देशक तथा कलाकार फ’रहान अ’क्तरकी श्रीमतीको नाम अ’धुना भवानी हो । दुई जोडीको उमेर अन्तर ६ बर्षको छ । आफू भन्दा ६ बर्ष जेठी अ’धुनासँग फ’रहानले बिहे गरेका थिए । ’अधुनाले ‘दि’ल चा’हाता हे’का लागि कथा समेत ले’खेकी थिइन् ।
४. अर्जुन रा’मपाल र मे’हर जे’शिका:आफू भन्दा २ बर्ष बढि उमेरकी पूर्व सु’पर मोडल मे’हर जे’शिकासँग अर्जुनले बिहे गरेका हुन् । उनीहरुको बिहे भएको करिब १६ बर्ष भै’सकेको छ । तर पनि अर्जुन आफ्नी श्रीमतीलाई खु’बै माया गर्छन् ।
५. राज कु’न्द्रा र शि’ल्पा से’ट्टी:बलिउडकी सफल नायिका शि’ल्पा से’ट्टीको उमेर उनका पति राज कु’न्द्राको भन्दा ३ महिनाले ब’ढि छ ।
यी’नीहरु बाहेक यी जाेडी पनि छन् जस्काे मायालाई उमेरले छे’केन । हेराै केहि जाेडीका तस्विरहरु …..